မူလစာမျက်နှာ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဧဝံဂေလိတရား၊ ယေရှုခရစ်၏သတင်းကောင်းကို ဟောပြောရန် မစ်ရှင်ရှိသည်။ သတင်းကောင်းက ဘာလဲ။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်လည်သင့်မြတ်စေခဲ့ပြီး လူသားအားလုံးကို အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ကို ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ ယေရှု၏သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ကိုယ်တော်အတွက် အသက်ရှင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကို ကိုယ်တော်ထံအပ်နှံရန်နှင့် ကိုယ်တော်နောက်လိုက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ယေရှု၏တပည့်များအဖြစ် အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်၊ သခင်ယေရှုထံမှသင်ယူကာ၊ သူ၏ပုံသက်သေကို လိုက်လျှောက်ကာ ခရစ်တော်၏ကျေးဇူးတော်နှင့် သိကျွမ်းခြင်း၌ ကြီးထွားလာစေရန် ကူညီပေးရခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပျော်ရွှင်ပါသည်။ ဆောင်းပါးများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်းသောတန်ဖိုးများဖြင့် ပုံဖော်ထားသော အငြိမ်ကမ္ဘာတွင် နားလည်မှု၊
ပေါ်ပေါက်ပါတယ် စနေနေ့၊ 5. Februar 202214.00 Uitikon ရှိ Üdiker-Hus တွင် မွန်းလွဲ 8142 နာရီတွင်
မဂ္ဂဇင်း "FOCUS ယေရှု"
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာရေးပါ။ မင်းကိုသိဖို့ ငါတို့စောင့်မျှော်နေတယ်။
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် အနာဂတ် အားလုံးမျှော်လင့်ချက်
1 ရက်နေ့2. 1961 ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ကမ္ဘာကြီးက မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရုရှားကို ကြည့်နေခဲ့တယ်- Yuri Gagarin ဟာ အာကာသထဲမှာ ပထမဆုံးလူဖြစ်သင့်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစ္စရေးက အာကာသပြိုင်ပွဲမှာ ရုရှားကို အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရူးသွပ်တဲ့ အဆိုကို နားလည်ဖို့ အနှစ် ၂၀၀၀ လောက်ကို ပြန်သွားရမယ်။ ထိုအချိန်တွင် ဘုရားဖူးများ ပြည့်နှက်နေမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်နေသည့် ဗက်လင်ဟမ်ဟုခေါ်သော မြို့ငယ်လေးတစ်ခုရှိသည်။ မောပန်းနွမ်းနယ်နေသော ခင်ပွန်းသည်သည် သူနှင့် သူ့ဇနီးအတွက် ညအိပ်ရန် နေရာတိုင်းတွင် အိပ်ရန်နေရာရှာရန် မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ အချိန်အတော်ကြာ ရှာဖွေပြီးနောက်တွင် ဖော်ရွေပျူငှာသော တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်က Josef နှင့် ၎င်း၏ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာရှိသော ဇနီးသည်ကို တိရစ္ဆာန်များဘေးရှိ နွားတင်းကုပ်တွင် အိပ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထိုညတွင် သူတို့၏သားယေရှုကို ဖွားမြင်သည်။ တခါ…
အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးနိုင်လျှင်၊ ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ။ သင့်ကံကြမ္မာအရ "ကြီးကြီး" ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လူတွေဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရတာလဲ။ သို့မဟုတ် သေးငယ်သော်လည်း အရေးတကြီးဖြစ်သည်- ကျွန်ုပ်ဆယ်နှစ်သားအရွယ်တွင် ကျွန်ုပ်ထံမှ ထွက်ပြေးခဲ့သော ကျွန်ုပ်၏ခွေးမှာ ဘာဖြစ်သွားသနည်း။ ငယ်​ငယ်​ကချစ်​သူနဲ့လက်​ထပ်​ရင်​ ဘာဖြစ်​မလဲ။ ဘုရားသခင်က ကောင်းကင်ကို ဘာကြောင့် ပြာစေတာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျားက သူ့ကို မေးချင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်- မင်းက ဘယ်သူလဲ။ ဒါမှမဟုတ် မင်းဘာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ဘာလိုချင်လဲ။ အဲဒါအတွက် အဖြေက တခြားမေးခွန်းအများစုကို ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင်သည် မည်သူဖြစ်သနည်း၊ အဘယ်အရာကို အလိုရှိသနည်းဟူမူကား၊ သူ၏ဖြစ်တည်မှု၊ သူ၏သဘောသဘာဝနှင့်ပတ်သက်သော အခြေခံမေးခွန်းများဖြစ်သည်။ အခြားအရာအားလုံးကို၎င်းကဆုံးဖြတ်သည် - အဘယ်ကြောင့်စကြာဝဠာ ...
Les Miserables (The Wretched) ဇာတ်လမ်းတွင် Jean Valjean သည် ထောင်မှလွတ်လာပြီးနောက် ဘုန်းတော်ကြီး၏နေအိမ်သို့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ညစာနှင့် တစ်ခန်းစီပေးသည်။ ထိုညတွင် Valjean သည် ငွေထည်အချို့ကို ခိုးယူထွက်ပြေးသော်လည်း ခိုးယူထားသောပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဘုန်းတော်ကြီးထံ ပြန်ပို့သော ရဲများက ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသည်။ ဂျင်းကို စွပ်စွဲမည့်အစား ဘုန်းတော်ကြီးက ငွေမီးခုံနှစ်ချောင်းကို ပေးကာ ပစ္စည်းများကို ပေးသည်ဟု အထင်ကြီးစေသည်။ သူ့အစ်မရဲ့ ကလေးတွေကို ကျွေးဖို့ မုန့်ခိုးယူမှုနဲ့ တင်းမာပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ထောင်ကျနေတဲ့ Jean Valjean ကို ထောင်ချလိုက်တာ...
"အောင်မြင်မှု" မဂ္ဂဇင်း မဂ္ဂဇင်း«ယေရှုခရစ်ကိုအဓိကထားသော» WKG သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
ကျောင်းတက်နေစဉ်အတွင်း Triune God ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် တောင်းဆိုသည့် အတန်းတစ်ခုတက်ခဲ့သည်။ သုံးပါးတစ်ဆူ သို့မဟုတ် သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကို ရှင်းပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကန့်သတ်ချက်များသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်၊ မတူညီသောလူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏ အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်ကို ရှင်းပြရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ အိုင်ယာလန်တွင်၊ စိန့်ပက်ထရစ်သည် မတူညီသောပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးဖြစ်သော ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဘုရားသခင်သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းသာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြရန် စိန့်ပက်ထရစ်သည် ရွက်သုံးပွင့်ပွင့်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အခြားသူများကလည်း ၎င်းကို သိပ္ပံနည်းကျဖြင့် ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဒြပ်စင်များဖြစ်သော ရေ၊ ရေခဲနှင့် ရေနွေး၊ ...
ပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သူ သို့မဟုတ် သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်ရက်ကို တွက်ချက်နိုင်သည့်သူ အမြဲရှိလိမ့်မည်။ Nostradamus ၏ပရောဖက်ပြုချက်များကို Torah နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ဟုပြောနိုင်သောရဗ္ဗိတစ်ဦး၏အကောင့်တစ်ခုကိုမကြာသေးမီကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သည်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် ယေရှု ပြန်လာမည်ဟု အခြားသူတစ်ဦးက ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ 2019 နေရာယူမည်။ ပရောဖက်ပြုချက်ချစ်သူများစွာသည် သတင်းအသစ်နှင့် သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်ကို ချိတ်ဆက်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ Kark Barth သည် အမြဲပြောင်းလဲနေသော ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကို ကောင်းစွာနားလည်ရန် ကြိုးပမ်းနေစဉ် သမ္မာကျမ်းစာတွင် ခိုင်မြဲစွာကျောက်ချနေရန် လူတို့အား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ရည်ရွယ်ချက် ယေရှု...
သမ္မာကျမ်းစာတွင် “ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏” ဟု ရေးထားသည်။1. ဂျို 4,8) သူသည် လူတို့ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်းငှာ ကြံဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ သမ္မာကျမ်းစာက ဘုရားသခင်ရဲ့ အမျက်ဒေါသကိုလည်း ထောက်ပြထားတယ်။ သို့သော် ဖြူစင်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဒေါသနှင့် မည်သို့ဆိုင်သနည်း။ အချစ်နဲ့ ဒေါသဟာ သီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် မေတ္တာတရား၊ ကောင်းမှုပြုလိုသောဆန္ဒသည်လည်း ဒေါသ သို့မဟုတ် ထိခိုက်နစ်နာစေသော မည်သည့်အရာကိုမဆို ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သည် ။ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာသည် တသမတ်တည်းဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဆန့်ကျင်သော မည်သည့်အရာကိုမဆို ဆီးတားသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို ဆန့်ကျင်သည် - သူသည် ၎င်းကို တိုက်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ချစ်တယ်...
အပိုဒ် "ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း" "သမ္မာကျမ်းစာ" «ဘဝရဲ့စကားလုံး»